SU'AAL: Isticmaalka Barafka joogtada ah?
Author Topic: SU'AAL: Isticmaalka Barafka joogtada ah? (Read 3641 times)
« on: August 27, 2015, 09:13:18 PM »
Dhakhtar, haddii Barafka si xad dhaaf ah, loo cuno, sida marka uu barafku fadhiyo, (jalaato, ice cream IWM) ama si xoog leh loo cabbo sida marka barafka wax lagu qaso oo laga sameeyo sharaab qaboow badan leh), dhibaato ma u keeni kartaa caafimaadka qofka, Gaar ahaan caruurta, haweenka uurka leh iyo dadka waayeelka ah? Mahadsanid.
Re: SU'AAL: Isticmaalka Barafka joogtada ah?
« Reply #1 on: August 28, 2015, 11:14:34 AM »
Biya qabo ama jallaato la cuno wax dhib ah oo gooni ugu keenayso ma jirto qofka..
Hadduu qofka si gooni ah cunista ma cabidda waxa qabow ay dhibaan sida hadduu qofka qabo cuno xanuun ama quuman oo uu dhakhtarka kula taliyo inuu ka fogaado waxyaabaha qabow waa inuu ka fogaadaa.
Laakiin sida kale dhibato ma lahan.
Haddii aad su'aashaada ka waddid dadka barafta ruugo ama raamsado oo caado ka dhigtay khaas ahaan haweenka uurka leh, taasi waa cillad ay keento dhiigyarida khaas ahaan markii jirka ay ku yar tahay birta.
Waxyaabaha qofka uu ku walfo inuu cuno waxaa ka mid ah, carada, dhagaxaanta, dhuxusha, barafka ama waxyaabo kale, intaasba haddii lagu arko qof uur leh waa in si dhakhso ah laga baaro dhiigyari.
Hadduu qofka sidaa baraf ugu walfo oo joogto barafka u ruugo, waxay dhaawac u geysan kartaa ilkaha ama in qofka uu sidaas biyo badan jirkiisa ku galaan oo macaadinta jirkiisa ay ka dhunto isu-dheelli tirnaanta, taasina ma ahan wax aad u dhaca.
Cabidda biyaha qabow ama cunista barafka sideeda dhibaato uma keenaan illaa inuu qofka qabo xanuun barafka ama waxa qabow u daran yahay mooyee.
Views: 14993 December 10, 2013, 07:14:30 PM
Views: 10243 May 26, 2011, 07:12:02 PM
Views: 7485 April 08, 2017, 05:33:49 PM
Views: 4378 February 14, 2017, 09:55:07 PM
Views: 9507 December 22, 2007, 02:59:14 AM